पूर्व अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा।प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने नीति नबनाई नहुने तर, बनाएको नीतिबाट पनि किसानले फाइदा नपाएको बताउँछन् । “वास्तविक किसानले लाभ लिउन् भनेरै हामीले नीति बनाउने हो, तर यसको फाइदा टाठाबाठाले मात्रै उठाए । सक्षम र बलियो व्यावसायिक आधार भएका व्यवसायीहरूले सहुलियत ऋणमा लोभ नगरिदिए हुन्थ्यो”, उनी भन्छन् ।
सरकारबाट कृषि ब्याज अनुदान लिनेमा लामो समयदेखि दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका देशका ठूला डेरी उद्योगहरू पनि छन् । त्यसैमध्येको एक काठमाडौं डेरीले पनि २०७६ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा मात्रै रू. २७ लाख ४३ हजार ६७४ ब्याज अनुदान दिएको छ । व्यवसायी प्रकाश महर्जनको परिवारको स्वामित्वमा यो उद्योग छ । उनै महर्जनको आइसक्रिम उत्पादन गर्ने शक्ति फुड्स प्रालिले पनि कृषि कर्जाबापत लिएको ऋणमा रू. ३८ लाख ७७ हजार ४५५ ब्याज अनुदान पाएको छ । त्यसैगरी, चार दशकदेखि दुग्ध व्यवसायमा स्थापित नेपाल डेरीले पनि रू. ३६ लाख ६० हजार ८३१ ब्याज अनुदान पाएको छ । राजकुमार दाहाल सञ्चालक रहेको अर्को ठूलो उद्योग राजधानी डेरीले पनि कम्तीमा रू. १३ लाख ब्याज अनुदान लिइसकेको छ ।
चितवनका पोल्ट्री व्यवसायमा जमेका ठूला व्यवसायीहरू पनि अनुदान हत्याउनेको सूचीमा छन् । डा। तिलचन्द्र भट्टराईको पञ्चरत्न समूहका दाना उत्पादन, ह्याचरी, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा करीब एक दर्जन व्यवसाय छन् । पोल्ट्री क्षेत्रमा ठूलो कारोबार गर्ने यो समूहका कम्तीमा चार कम्पनीले कृषि ऋण लिएर ब्याज अनुदान पाइरहेका छन् । यो समूहअन्तर्गतको पञ्चरत्न फिड प्रालिले २०७६ को चैतदेखि २०७७ पुससम्ममा रू. ६ लाख १० हजार ५०१ ब्याज अनुदान पाएको छ । यही समूहको पश्चिमाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले पनि रू. ६ लाख १८ हजार ८२८ तथा पूर्वाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले रू. ८ लाख ५३ हजार ४२५ ब्याज अनुदान पाएका छन् । त्यसैगरी, यही समूहको पञ्चरत्न ह्याचरीले पनि रू. १ लाख ९८ हजार १२१ अनुदान पाएको छ ।
चितवनको डल्लाकोटी समूहको रासायनिक मल र विषादीको आयात तथा उत्पादन आदिमा ठूलो कारोबार छ । यो समूहअन्तर्गतको डल्लाकोटी पोल्ट्री फार्मले सरकारबाट २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा कृषि ऋणको ब्याज तिर्न रू. ४० लाख ९८ हजार २४४ अनुदान पाएको छ । चितवनकै दाउन्ने कर्पोरेट अन्तर्गतको दाउन्ने ब्रिडिङ फार्मले पनि कृषि ऋणको ब्याजमा सरकारबाट रू. ४२ लाख ५४ हजार ४२१ अनुदान पाएको छ । यही समूहको दाउन्ने पोल्ट्री ब्रिडिङ फार्मले पनि रू. १९ लाख ३९ हजार १३४ ब्याज अनुदान पाएको छ ।
२०५० को दशकदेखि नै कुखुरा सम्बन्धी व्यवसायमा स्थापित काठमाडौंको बालाजुस्थित आधुनिक पोल्ट्रीका दाना उद्योग, ब्रिडिङ फार्म, रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालनमा छन् । यो व्यावसायिक घरानाले पनि कृषि ऋण भनेर लिएको बैंक कर्जामा सरकारले २०७५ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा रू. ४९ लाख ९१ हजार ११३ ब्याज अनुदान दिएको छ । आधुनिक डेरी प्रोडक्ट्सले पनि रू. २४ लाख ८ हजार ४८ ब्याज अनुदान पाएको छ । यसका तीन कम्पनी आधुनिक फिड, आधुनिक पोल्ट्री ब्रिडिङ र आधुनिक एग्रो प्रोडक्ट्सले पनि क्रमशः रू. २५ लाख ९० हजार, ३८ लाख २३ हजार तथा रू. ३७ लाख १९ हजार ब्याज अनुदान लिएका छन् ।
कुखुरासम्बन्धी व्यवसायमा साना र मध्यमस्तरका किसानभन्दा ठूला व्यवसायीले नै लाभ सोहोरेको देखिन्छ । बालाजुस्थित क्वालिटी ह्याचरी देशका ठूला र स्थापित ह्याचरी उद्योगमध्ये एक हो । यसले कम्तीमा रू. २५ लाख ८९ हजार अनुदान लिइसकेको छ । बालाजुकै अर्का ठूला पोल्ट्री व्यवसायी नारायण फुँयालको फुँयाल पोल्ट्री फिड एण्ड ह्याचरी उद्योगले पनि रू. ५२ लाख २७ हजार ब्याज अनुदान लिएको छ ।
कुखराको तयारी मासु र परिकार विक्री गर्ने काठमाडौं आधुनिक चिकेन हाउसले पनि रू. ४९ लाख ९१ हजार अनुदान पाएको छ । प्रशोधित मासुको व्यापार गर्ने गरमेट भियना मिट एण्ड मोर प्रोडक्ट्सले पनि रू. १० लाख ४१ हजार ९६ ब्याज अनुदान पाइसकेको छ । पोखरामा कुखुराको मासुको परिकार विक्री गर्ने फेवा मिट प्रोडक्ट्स प्रालिले पनि रू. २७ लाख ९८ हजार २४७ ब्याज अनुदान पाएको छ ।
पोखराको फेवा ग्रुप अफ पोल्ट्रीले २०७७ असोज–पुसमा रू. ५ लाख २४ हजार ६६७ ब्याज अनुदानवापत सरकारबाट बुझेको छ । यो समूह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीप्रसाद पौडेलको हो । पोखराकै भट्टराई पोल्टी फार्मले पनि २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा रू. ४४ लाख ७२ हजार ९३८ ब्याज अनुदान लिएको छ । यो कम्पनीका डा. अशेष भट्टराईले नेपाल सरकारको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट समेत मासु प्रशोधन उद्योगका लागि रू. ८३ लाख ८८ हजार अनुदान लिएका छन् ।
केही नाफामूलक लघुवित्त संस्थालाई पनि राज्यकोषबाट झिकेर ब्याज अनुदान दिइएको छ । बनेपाको मिर्मिरे लघुवित्तलाई रू. १८ लाख ८३ हजार ५६२, कैलालीको एनआरएन लघुवित्तलाई रू. १२ लाख १९ हजार १७८, कञ्चनपुरको घोडाघोडी लघुवित्तलाई रू. ७ लाख ५६ हजार १६४ र कैलालीको खप्तड लघुवित्तलाई रू. ९ लाख १७ हजार ८०९ ब्याज अनुदान दिइएको भेटिएको छ ।
कुन कम्पनीले कति अनुदान लिए ?
« कर्णाली राजमार्गमा एकैवर्ष १२ नयाँ पक्की पुल निर्माण सम्पन्न
कतार एयरवेज बन्यो विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स कम्पनी, यी हुन् संसारका उत्कृष्ट १० एयरलाइन्स »